Furniinka Furiinka iyo Rugaha Caafimaadka Halyeeyada | Legal Aid Society
Rugta Caafimaadka Veterans
Rug Caafimaad Furiin
Xarumahayaga is-caawinta ee furitaanka, waxaan ka caawinaa macaamiisha inay buuxiyaan waraaqaha si ay u xareeyaan furriinka. Furiin ahaan maxkamada ayaad kaligaa u xaraynaysaa, laakiin waxaan u joognaa inaan kaa caawinno hawsha.
Xaaladaha badankood, waxaan kaliya qaadannaa furiinno fudud, oo aan qarsoonayn rugta la-talinta. Haddii aad leedahay xanaaneyn ilmo ama arrimaha masruufka carruurta, fadlan marka hore tag maxkamadda Qoyska, oo mar labaad nala soo xiriir markii aad ka hesho amarada maxkamadda maxkamadda Qoyska arrimahaas. Kiiska kiisaska haynta, haddii aadan awoodin inaad qareen qabsato, garsooraha maxkamada qoysku waa inuu mid kuu doortaa dhageysigaaga koowaad.
Si aad u ogaato inaad u qalanto rugta caafimaad, fadlan ka wac Caawinta Sharci ee halkan:
Markaad dhageysanaato farriimaha dhaceynaya, xulo ikhtiyaarka Bilowga Furiinka waxaana laguu wareejin doonaa takhasus ku-takhasus ah oo kaa caawineysa baaritaanka furiinka.
Rugaha Caafimaadka ee Is-Caawinta Macaamiisha ee ay kujirto Musalafnimada
Xarumahayaga sharciga macaamiisha ayaa kaa caawin kara dhibaatooyinka sida kicinta, xisaabaadka bangiga ee la qaboojiyey, dhibaatooyinka deynta, amaahda ardayda, xatooyada aqoonsiga, dhibaatooyinka gawaarida, xiritaanka adeegyada iyo dhibaatooyinka kale ee macaamiisha. Rugta la-talinta, waxaad fursad u leedahay inaad qareen ama lataliye kala hadasho dhibaatadaada sharciyeed.
Goorma iyo Xagee Ay Xaruntu Caafimaadku?
Xafiiskayaga Syracuse wuxuu hayaa rugaha caafimaad ee macaamiisha loogu talagalay dadka dakhligoodu hooseeyo ee ku nool Onondaga iyo gobollada ku xeeran. Xafiiskayaga 'Binghamton' wuxuu kaloo qabtaa rugo caafimaad oo loogu talagalay dadka ku nool Broome iyo gobollada ku xeeran. Diyaarinno ayaa lagu sameyn karaa si ay u xaadiraan xarumahaan shaqsi ahaan ama taleefan ahaan.
Sideen Isku Diiwaangeliyaa?
Markaad dhagaysanayso natiijada fariinta, xulo ikhtiyaarka inaad ka qeybgasho Kilinis Bilaash ah waxaana laguu gudbin doonaa Takhasusle Qaadis ah oo kaa caawin doona baaritaankaaga u qalmida.
Annaga oo kaashanayna Xarunta cusub ee Veterans Drop-In Center ee magaalada hoose ee Utica, waxaan si joogto ah u haynaynay rugo caafimaad oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay halyeeyada. Rugta la-talinta, ruug-caddaayadu waxay fursad u leeyihiin inay kula kulmaan fool-ka-fool qareen iskaa wax u qabso ku saabsan wixii dhibaato sharciyeed ee madaniga ah, oo lacag la’aan ah. Waxaan soo dhaweyneynaa askarta halyeeyada ah meelkasta oo ay joogaan adeegayaga, waana uga mahadcelineynaa howsha ay u hayaan umadeena.
Kala xiriir xafiiskayaga Utica:
Wadada 120 Bleecker